Ngathi | Zigong City Xinhua Industrial Co., Ltd.
Zigong City Xinhua Industrial Co., Ltd. yasekwa ngo-2005, Zigong kwisixeko Sichuan kwiPhondo China, Zigong yenye Tungsten khabhayithi Material iziseko zemveliso Material e China. I-Xinhua Industrial yinkampani egxila kwimveliso yezixhobo ze-carbide kunye nezixhobo zokusika i-carbide, i-ZWEIMENTOOL yindawo ephezulu yokusika uphawu lwezixhobo ze-carbide ze-Zigong City Xinhua Industrial Co., Ltd.
Ukunikezelwa ngurhulumente njengophando oluphezulu lweshishini lokuthumela ngaphandle kweenkwenkwezi, Ukukhokela uphando kunye nophuhliso lwezixhobo ze-carbide kunye nezixhobo zokusika i-carbide e-China.
Indawo yethu yefektri ye-25000㎡ kwaye inabasebenzi abangama-120 kunye nabasebenzi bebonke. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava emveliso ye-tungsten carbide kunye nezixhobo zokusika i-carbide.
Sinehlabathi imigca yokuvelisa yeklasi yokuqala kunye nolawulo lomgangatho.
Gcwalisa umgca wemveliso ukusuka kumgubo weWC ukugqiba iimveliso zeCarbide ezinje ngeCarbide Woodworking knives, Carbide Rods, Carbide Rotary Burrs, Carbide Cutting Tools and Circular Slitting Knives njl.
Iimveliso ezingama-70% zithunyelwa phesheya kwezilwandle ikakhulu iimveliso zorhwebo eziphambili. Iimveliso zethu ziyathandwa ngabathengi kwihlabathi liphela ngomgangatho ophezulu kunye nexabiso lokhuphiswano.
Sisoloko silive ukuba: Umgangatho ngumthetho wokuqala wokusinda kwishishini .Injongo yethu: Ukuba yeyona nto ibaluleke kakhulu kwizinto ze-carbide kunye nezixhobo zokusika i-carbide emhlabeni.
Khetha us, siya kuba iqabane lakho ishishini ethembekileyo!